WAAYIHII WARSAME Q33AAD W/Q: Cali M Diini | Laashin iyo Hal-abuur
WAAYIHII WARSAME Q33AAD W/Q: Cali M Diini
WAAYIHII WARSAME Q33AAD
Bil kadib aqalgalkii Warsame iyo Idil subax aroortii salaaddii fajar kadib Idil oo jikada ku jirta Warsame qolkiisa ku labbisanayo oo shaqo isku diyaarinayo ayay mar qura ka warheleen askar hubaysan oo iriddii xoog ku soo jabisay. Askartii waxa ay gardaduub u xireen Warsame waxa ay ku riteen gaari shabaqle ah halka Idil oo aysan katiinaday ay ku rideen baabuur yar.
Warsame waxaa lagu xiray xabsiga Bangaani oo Islii ku yaal halka Idil la geeyay gurigii waalidkeed. Xaaji Doolaal oo xiriir fiican la leh madaxda Boliiska Kenya ayaa hawsha ka soi shaqeeyay asaga oo askarta u sheegay in nin dalka sharcidarro ku jooga uu gabdhiisi ka afduubtay oo guri ku haysto.
Warsame dhawr asbuuc markii uu ku xirnaa saldhigga Bangaani waxaa loo gudbiyay xabsiga wayn ee Nairobi asaga oo aan maxkamad la saarin. Warsame ma uusan helin jaanis uu isku difaaco ama dadkiisi ku ogaysiiyo xariggiisa. Mar walba oo askarta xabsigu damcaan in ay maxkamad Warsame ugu gudbiyaanna Xaaji Doolaal ayaa lacag ku laaluushayay si ay xabsiga ugu sii hayaan.
Idil guriga ayaa xabsi guri lagu galiyay oo Xaaji Doolaal ilaalo saddex ah ayuu guriga keenay si ay Idil u ilaaliyaan.
Saddex bilood markii Idil xabsi guri ku jirtay ayaa habeenkii dambe xanuun ku soo booday oo matag ayay ku waalatay. Isbitaal ayaa la geeyay dhakhtarkiina waxa uu sheegay in ay leedahay uur afar bilood ah. Idil guriga ayaa lagu celiyay xabsi gurigii ayaa na dib ugu bilowday.
Idil ma oga wax Warsame lagu sameeyay taleefankiisina waa dansan yahay tan iyo subixii askartu guriga kala baxday farriimo badan oo ay iimaylka ugu dirtay jawaab ka ma aysan helin. Haddii Idil wici lahayd odayaashii reerkiisa ahaana ma nambarradooda ma hayso.
Sagaal bilood kadib Idil waxa ay dhashay wiil aysan ogayn halka aabbihiis ku dambeeyay. Labo beri kadib markii Idil umushay ayaa waxaa soo wacay taleefan dibadda ah, markii ay qabatayba oo helo tiri waxaa la hadlayay qof dumar ah ayaa ku tiri “Helo, walaalo waa Faaiso ee ma Idil baa?” “haa waa Idil ee abbaayo Faaiso sidee tahay?” “Idil abbaayo Warsame war ma ka haysaa muddo sannad ku dhaw taleefankiisi waa dansan yahay iimalkana ka ma soo jawaabayee”
Idil waxa ay Faaiso u sheegtay wixii dhacay in Warsame ay ugu dambaysay subixii askartu wadatay ayaduna xabsi guriga ku jirto oo aysan aqoon qof ay wacdo oo Warsame war ka keena. Sidoo kale markii xabsi guriga la galiyay uu aabbeheed ka tirtiray dhammaan magacyada dadkii takeefankeeda ugu kaydsanaa sidaas darteed aysan wici karin dad badan oo xabsiyada Warsame ka soo raadin lahaa.
Faaiso aad bay uga naxday warka dareenka leh ee Idil u sheegtay waxayna horay ka wacday wiil habaryarteed Sareedo dhashay oo lagu magacaabo Gaduudow ka na codsatay in uu si deg deg meel ugu soo ogaado Warsame Faarax oo ciidanka Kenya kala bexeen gurigii uu ka degganaa Islii toban bilood ka hor.
Gudoodow oo si fican u kala garanayay xabsiyada kala duwan ee Nairobi ku yaalla maadaama la shaqeeyay haddana la shaqeeyo hay’ado kala duwan oo Kenya deggan waxa uu tagay xabsiga Bangaani oo saraakiisha maamusha qaarkood yaqaannay. Saraakiishii xabsigu waxa ay Gaduudow u sheegeen in ninkaan uu dhawr asbuuc xabsiga ku jiray kadibna ay iska sii gudbiyeen. Guduudow waxa uu tagay xabsiga dhexe markii uu la kulmay saraakiisha ilaalada xabsiyadaba ugu dambayn waxa ay u sheegeen in uu xabsiga ku jiro. Guduudow xabsigii ayuu gudaha u galay waxa uu na Warsame ugu tagay qol yar maxaabiis farabadani ku jiraan. Saraakiishii Warsame qolkii inta ay ka soo bixiyeen ayay asaga Gaduudow fariisiyeen labo kursi oo barxadda xabsiga yaalla. Warsame waxa uu Gaduudow uga warramay sidii wax u dhaceen iyo in uu halkaan ku jiray toban bilood. Waxa Warsame Gaduudow waydiiyay in war ka hayo Idil iyi inkale Gaduudow waxa uu Warsame u sheegay in uusan Idil aqoon balse ay soo wacday gabar ay ilmo habreed yihiin oo Faaiso la dhaho oo Kanada joogta. Gaduudow Faaiso ayuu wacay oo Warsame la hadalsiiyay. Faaiso waxa ay Warsame u sheegtay in Idil wiil dhashay bil ka hor ayada iyo wiilkuna ay caafimaad qabaan. Warsame aad ayuu ugu farxay warka farxadda leh ee Faaiso u sheegtay waxa uu na yiri “wax walba oo igu dhacay Idil iyo wiilkayga oo caafimaad qaba ayaan ku hilmaamay.” Faaiso waxa ay wacday Idil si ay Warsame ugu xirto balse nasiibdarro intii aysan qaban baa askarigii Warsame iyo Gaduudow u yimid u na sheegay in uu 15 daqiiqo ee loo oggolaa dhammaatay.